तस्बिर कथा » सचिताको शृंगार - तस्विर/भिडियो - नेपाल
तस्बिर कथा » सचिताको शृंगार
- शब्द/तस्बिर : श्रुति श्रेष्ठ
चोर औँलाले निधारको बीच भाग छामेपछि उनले अर्काे हातमा रहेको गाजलले टीका लगाइन् । कुशल ब्युटिसियनले लगाइदिएको जस्तो गरी निधारको बीचमै टीका पर्‍यो । ‘आहा कस्तो सुहाएको !!’ सँगैकी साथीले भनेपछि सचिता पाण्डेको अनुहारमा खुसीका रेखा दौडिए । भर्खर १८ वर्ष टेकेकी उनले जन्मजात संसारका कुनै रंग देख्न पाएकी छैनन् । आफ्नो आँखामा कुन रोग लागेको हो ? किन यस्तो भएको ? उनलाई ठ्याक्कै थाहा छैन । उनका लागि यो संसार रंगहीन छ तर रंगीन सारी लगाउन अति रुचाउँछिन् ।
हालै राजधानीमा आयोजित दृष्टिविहीनहरूका लागि आयोजना गरिएको दैनिक शृंगार तालिममा सहभागी हुँदा सचिता औधी खुसी देखिन्थिन् । ब्रेललिपिका माध्यमबाट एसएलसीमा ८४.५ प्रतिशत ल्याएकी सचिता ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, बालाजुमा कक्षा ११ मा पढ् दैछिन् ।